Igodo ime ezigbo selfie | Akụkọ akụrụngwa
Ihe ndị a bụ igodo ime selfie zuru oke
Ugbu a, ekeresimesi na-abịa ndị ga - esoro ndị enyi ha, ezinụlọ ha ma ọ bụ ọbụlagodi na ụfọdụ narị narị akụkụ pụrụ iche, wee chọọ ihe ekeresimesi na-adọrọ mmasị, nke zoro ezo n'obodo niile. O doro anya na Selfies bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka ị ghara ịnwụ n'oge pụrụ iche, ọ bụ ezie na iji mee ka ha nwee ezigbo mma ma bụrụ oke na izu oke ezughị iji dobe ma gbaa.
Ma ọ bụ ya na-enweta ihe zuru okè selfie ọ bụ na-akpali na-eso ụfọdụ bụ isi igodo, nke mere na ihe atụ onye ọ bụla na-apụta ìhè, ọma enịm ke foto na-enweghị na-enye nsogbu nsogbu kwuru foto na ụfọdụ nke nhọrọ nke n'ihu igwefoto nke anyị mobile ngwaọrụ, nke anyị kwesịrị deactivate. Ọ bụrụ na inwetabeghị selfie zuru oke, echegbula onwe gị n'ihi na ndị niile ị na - ewere kristmas a ga - abụ nke zuru oke maka igodo na atụmatụ anyị ga - enye gị taa site na edemede a
Nke mbụ, nkwanye anyị bụ na ị nwere ekwentị gị ma ọ bụ ọbụna igwefoto dị n'aka, ka ị nwee ike ịnwale igodo niile anyị ga-enye gị. Echerela ka ị nwaa ndụmọdụ anyị niile n’ụbọchị ekeresimesi na mgbe ezin’ụlọ gị niile na-echere onwe gị zuru oke, n’ihi na ị gaghị enweta ya n’emebighị ihe mbụ.
1 Kpachara anya na nhọrọ nke igwefoto n'ihu nke ama gị
2 Ọkụ bụ isi
3 Sọpụrụ ọchịchị nke atọ
4 Nzacha, nhazi zuru oke maka selfie
5 Mkpịsị aka selfie, ihe mepụtara na nso nso a
Kpachara anya na nhọrọ nke igwefoto n'ihu nke ama gị
Igwe foto dị n'ihu nke smartphones na-ejikarị nhọrọ rụọ ọrụ, ụfọdụ n'ime ha na-adọrọ mmasị, iji nweta foto dị mma. O di nwute, ufodu n'ime uzo ndia adighi emezue ebumnobi ha ma nwee ike ibibi ngwa ngwa nke a ga-echeta.
Otu nhọrọ na m chere na ị ga-mgbe niile deactivate mara dị ka "Mma mma". Nke a bụ ọrụ maka ịgbazi na oge ụfọdụ ụfọdụ ihu nke ndị na-egosi na selfie, mana n'ọtụtụ oge mmezi ihe ndị a abụghị nke nkịtị ma mesịa nye ihu dị iche na ihu ndị nọ na foto ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike deactivate ya, mee ya ma ọ bụrụ na enweghị ike belata na opekempe ka ọ ghara ịdị ka mummy emere ọfụma na ọ bụghị mmadụ nkịtị.
Dị ka anyị gwaworo gị, ọ kachasị mma na ị nwale "Ọnọdụ Mma a" ugbu a na ọ bụ na na ụfọdụ njedebe ọ na-arụ ọrụ ya n'ezie ma ọ na-enyere ọtụtụ aka. N'ezie, n'oge a na-eji mkpịsị aka aka mee igwefoto nke ngwaọrụ mkpanaka nke nwere ezigbo nsonaazụ na ọnọdụ a dị iche.
Ọkụ bụ isi
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị hụrụ ka esi jide onye ama ama ama na Instagram na-ejide onwe ya na-ejide ngwaọrụ mkpanaka ya na aka ya na nke ọzọ na oriọna dị elu. E gosipụtara oriọna a na enyo nke dị n'azụ ya nke mere ka ọ mee ka onwe ya niile bụrụ nke zuru oke ma n'ime ha enwere ike ịhụ ya na agba na ọkụ nke masịrị ya nke ukwuu.
Iji see foto ọ bụla, ọ dị mkpa na ìhè dị nakwa na ọ na-enye anyị ìhè dịka o kwere mee. Iji nweta selfie zuru oke, ọkụ bụ igodo ya ma ọ dị mkpa na ọ na-eche anyị ihu. Yabụ na ọ dị mkpa na tupu ịse foto ịchọrọ maka ebe ọkụ dị mma.
Sọpụrụ ọchịchị nke atọ
Anyị maara na onye ọ bụla na-ekwu maka Iwu nke uzo ato nakwa na a gwala gị otu puku ugboro na ị naghị eji ya, na-enweghị ma ị maghị ihe ọ bụ. Echegbula, anyị ga-akọwara gị ya n'ụzọ dị mfe. Iwu a na-ekwu na ọ dị mma mgbe ị na-ese foto iji tinye ebumnobi bụ isi n'otu akụkụ ma ọ bụghị n'etiti, na-ewere foto niile. Nke a na - eweta mmetụta dị ukwuu nke ndapụta nke anyị nwere n’azụ.
Mgbe ah i nwere ike ịhụ na ihe oyiyi a nkọwa nke ọchịchị nke atọ;
Iji mee ka ndụ dịkwuo mfe, a na-atụ aro ka ị gbanye grid na ngwaọrụ mkpanaka anyị, nke mere na ọ na-egosi na ihuenyo yana idobe onwe gị mgbe ị na-ewere selfie dịtụ mfe.
Nzacha, nhazi zuru oke maka selfie
na nzacha Ha anọwo na ụwa nke foto ruo ogologo oge, mana ekele Instagram na ha nọ dị ka otu n'ime ndị kasị mma ego na-enye a dị iche iche aka ka foto na ọbụna idozi ụfọdụ n'ime ha. Selfies na-abụkarị foto dị aghụghọ mgbe ewepụtara site na ọnọdụ dị nso ka nzacha kwesịrị ekwesị nwere ike ịbụ etemeete zuru oke iji kpuchie ma dozie ntụpọ ma ọ bụ nsogbu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inweta selfie zuru oke, jiri nza, ọ bụ ezie ee, jụ ya mgbe niile ka mmadụ niile kwenye na ị nwere akpụkpọ zuru oke yana na ị bụ ezigbo ọkachamara na-ewere onwe gị.
Mkpịsị aka selfie, ihe mepụtara na nso nso a
Kemgbe ọ rutere n'ahịa ahụ, e rerela ọtụtụ narị puku osisi selfie gburugburu ụwa, n'ihi uru ha bara na ohere ọ ga-enye mgbe ha na-ewere onwe ha. Maka ndị na-amaghị ihe ọ bụ, ọ bụ ezie na echeghị m na enwere onye ọ bụla n'okwu a, A na-eji osisi a etinye ngwaọrụ mkpanaka anyị n'otu akụkụ ma rụọ ọrụ dị ka ogwe aka iji were selfie n'ebe dị anya.
Ndị a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. Ọ nwere ọnụahịa dị oke ọnụ ma nye anyị ohere ọ bụghị naanị iji wepụta onwe anyị site n'akụkụ ọzọ, ka, dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịhụ akụkụ ka ukwuu nke mbara ala, kamakwa ka ọtụtụ ndị mmadụ nwee ike ịpụta na foto ahụ na-enweghị ogwe aka dị ọtụtụ mita.
Ọ bụrụ na ịnweghị obere gadget a, ma eleghị anya, ekeresimesi a ị nwere ike ịjụ ndị Magi ma ọ bụ Santa Claus maka otu.
Ndị a bụ naanị igodo 5 anyị chọrọ inye gị ka ị nwee ike iji selfie zuru oke, mana ọ bụrụ na ị nwere karịa, anyị ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị kesara anyị. You nwere ike ime nke a site na iji oghere echekwara maka ikwu na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta ọ bụla anyị nọ.
Njikere ị nweta selfie zuru oke na ekeresimesi a?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe ndị a bụ igodo ime selfie zuru oke
7 smartwatches inye ma ọ bụ nye onwe gị ekeresimesi a
Peeji na ngwa iji mepụta mebere mebere